Hadal-jeedinta Mushariixnta kuraasta Aqalka Sare ee Somaliland | KEYDMEDIA ONLINE
Hadal-jeedinta Mushariixnta kuraasta Aqalka Sare ee Somaliland
Cabdi Xaashi ayaa kamid ah Musharixiinta kuwaasoo Maanta sameeyay hadal-jeedinta, oo uu ka qeybgalay RW Rooble iyo Mahdi Guuleed.
MUQDISHO, Soomaaliya - Teendhada Afisyooni oo ku dhaw Garoonka diyaaradaha Muqdisho, ayaa waxaa ka socda hadal-jeedinta Musharixiinta kuraasta Aqalka Sare ee Somaliland.
Musharixiinta oo ka badan 20 ayaa waxay u tartamayaan 11 kursi oo Somaliland loogu qoondeeyay Aqalka Sare ee Baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya, kaasoo doorashadiisa ka billaabatay Maamul Goboleedyada dalka.
Cabdi Xaashi oo horey usoo ahaa Afhayeenka Aqalka Sare ee waqtigiisu dhamaadey ayaa kamid ah siyaasiyiinta Gobollada Waqooyi ee tartanka ku jira, iyadoo kursigiisa buuq badan dhaliyay, kadib markii uu ka dhigay mid aan lagu tartameynin.
Cadaadis xooggan kadib, Cabdi Xaashi ayaa ogolaadey in lala tartamo, wuxuuna xalay diiwaan-geliyay Mushar malxiis ah oo u camira, iyadoo tani isaga leexiyay tooshkii ku shidnaa.
Wasiiro dhowr ah ayaa kamid ah Musharixiinta side Dubbe iyo Saalax, kuwaasoo afartii sano ee lasoo dhaafay uga tirsanaa Gollaha Shacabka, balse haatan u wareegsadey Aqalka Sare.
RW Rooble ayaa goobjoog ka ahaa furitaanka munaasabadda hadal-jeedinta, waxaana hareerihiisa fadhiyay Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi oo mudo u xayirnayd doorashadda.